Indawo yaseLime, iMorne Rouge St George - ukubukwa okumangazayo
'I-Limin' noma 'i-lime' e-Grenada isho ukuphumula futhi uphumule, i-Lime Place inakho konke okudingeka ukwenze lokho kanye!
Ivulekile futhi inefenisha encane, ihlinzeka ngeseyili ekahle ukuze ulenze ikhaya usekhaya ngesikhathi sokuhlala kwakho. Inamagumbi okulala ayi-2 ane-A/C, amagumbi okugezela angu-2. Wonke amagumbi amakhulu anikeza ukubukwa okumangalisayo phezu kwe-Morne Rouge bay. Izinyathelo ezingamamitha angu-80 ukusuka ogwini, amabha kanye nezindawo zokudlela, ivele ilungele ulwandle oluphumulele lwe-Caribbean - ungakwazi uku-lime ngokuthanda kwakho!
I-Lime Place inazo zonke izinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze ube neholide elihle. Itholakala ngaphakathi kwenkimbinkimbi ye-Mariposa Condominiums futhi esanda kulungiswa, umhlobiso ngowesimanje, mncane futhi unethezekile. Ibekwe ngaphezulu kwamasitezi amabili, igumbi lokuphumula, ikhishi, futhi womabili amakamelo okulala anokubukwa okumangazayo kwe-bay.
Ikhishi lihlome ngakho konke okubalulekile uma uthatha isinqumo sokudlela, okuhlanganisa ne-gas BBQ kuthala. Kodwa uma ungathanda ukudla ngaphandle kunezinketho eziningi esinyathelweni somnyango.
I-Lime Place ihlezi eceleni kwe-Morne Rouge Bay, inikeza ukubukwa okumangazayo, izitebhisi eziqhelelene nje nolwandle, ilungele iholide elimangalisayo.
Indawo ye-Lime cishe. 6.5 km/ 10 mins ukushayela usuka esikhumulweni sezindiza, kanye nemizuzu eyi-10 ukushayela ukuya e-St. George’s lapho uzothola khona imakethe kanye nokuthenga. Futhi-ke, kukhona futhi inketho yokugibela isikebhe usuka ebhishi laseMorne Rouge uye eSt George's uphinde ubuye futhi!
I-Lime Place isendaweni ekahle yokuhlola iGrenada, cishe. Imizuzu engu-20 uhamba ngezinyawo ukuya emzileni omkhulu wamabhasi, amabhasi ashibhile futhi kulula ukuwasebenzisa, amatekisi nawo kulula ukuwabhukha, ukuqasha imoto nakho kuyinketho futhi kunentengo ephusile.
Uma unquma ukwelula imilenze yakho futhi ufuna ukusampula ezinye izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela zalezo ezitholakala e-Morne Rouge Beach, ukuhamba ngezinyawo imizuzu emi-5 phezu kwegquma kukuyisa ekugcineni eningizimu yolwandle i-Grand Anse lapho kukhona amabha nezindawo zokudlela eziningi, futhi ngokuthanda kakhulu ungathola futhi i-scuba diving kanye ne-snorkelling.
Sizoxhumana nawe njengoba kusondela ukubhuka kwakho ukuze siqonde ukuthi hlobo luni lweholide ohlose ukuba nalo. Ungakwazi ukuhlela ukuhlala kwakho ukuze kuhambisane nawe - singahlela ukuthi uhlangatshezwe esikhumulweni sezindiza futhi ubanjwe kukho konke ukuhlala kwakho ngenketho yokuvakasha esiqhingini kanye nenkonzo yasendlini evamile. Okunye uma ungathanda ukuzitholela eyakho indlela kahle lokho kulungile nathi singakushiya wedwa 'ufake umcako' futhi uhlole.
Sizoxhumana nawe njengoba kusondela ukubhuka kwakho ukuze siqonde ukuthi hlobo luni lweholide ohlose ukuba nalo. Ungakwazi ukuhlela ukuhlala kwakho ukuze kuhambisane nawe - singahl…